Al-Shabaab oo soo bandhigtay Magaca iyo Halka uu ka yimid Nin oday ah oo fuliyay Weerarkii ka dhacay Buulo Burde « BredaNews
Al-Shabaab oo soo bandhigtay Magaca iyo Halka uu ka yimid Nin oday ah oo fuliyay Weerarkii ka dhacay Buulo Burde
587 Views Date March 19th, 2014 time 7:23 am
Al-Shabaab ayaa baraha Internetka ku faafisay Wareysi laga qaaday Nin oday ah oo la sheegay in uu fuliyay Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee habeen hore ka dhacay Magaalada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan.
Ninka Weerarka Fuliyay ayaa lagu Magacaabaa Cabdulaahi Axmed Cabdile waxaana da’diisa lagu sheegay 60-sano jir , Ninkan Fuliyay Weerarka Ismiidaaminta ah ee lagu galay Hotelka Camalow ee Degmada Buulo Burde ayaa ka yimid Dalka Norwey uu in mudo ah ku noolaa.
Wareysiga laga qaaday ninka is qarxiyay ayuu ku sheegay in uu horey uga tirsanaa Ururkii Al-Itixaad ee mar Soomaaliya ka dagaalami jiray , waxa uuna Ninkan tilmaamay Weerarka uu ka geesanayo Buulo Burde in uu ku faraxsan yahay ilaahna ugu dhawaanayo.
‘’Cadowga waxa uu isleeyahay Magaaladii Buulo Burde ayaad qaabsateen islaamkii waa carareen , waxaa leeyahay Islaamka waa joogaa , waxaana rajeenayaa Cadowga ku sugan Buulo Burde in gacmaheena ilaah ku halaago’’ ayuu yiri Cabdulaahi Axmed kahor intii uusan is qarxin.
Ninkan kamid ahaa Kooxihii Fuliyay Weerarkii habeen hore ka dhacay Degmada Buulo Burde ayaa gu baaqay Shacabka degan Degmadaasi in ay kasoo baxaan balantii ay horey Al-Shabaab uga qaadeen oo ahaa in ay la dagaalamaan Cadowga gacana siiyaan Dagaalka Al-Shabaab Wadaan.
Wareysiga laga qaaday Ninkan kamid ahaa kooxihii Fuliyay Weerarkii Buulo Burde ayaa ahaa mid dheer uu kaga hadlayay arimo badan oo ku aadan Dagaalada Al-Shabaab wadaan , waxa uuna u muuqay nin aad ugu faraxsan camaliyada uu ka geestay Buulo Burde.
Wariyihii Wareesanayay Cabdulaahi Axmed Cabdile oo u muuqda Mid jalbeesnaa ayaa ugu baryay ilaahey in uu u fududeeyo Weerarka uu damacsanaa in uu ka geesto Magaalada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan.
Weerarka Ismiidaaminta ah ee Habeen hore ka dhacay Magaalada Buulo Burde waxaa ku dhintay dad ku dhaw 20-qof ay ku jireen Saraakiil iyo Ciidamo katirsan Dowlada iyo AMISOM , waxaa sidoo kale ku dhaawcmay weerarkaasi tiro badan oo katirsan Ciidamadii halkaa ku sugnaa.